Ndezvipi zvinofarirwa nemari zviri pamutemo? | Ehupfumi Zvemari
Susana Maria Urbano Mateos | | Zvematongerwo enyika
Parizvino zvikwereti zvinoshandiswa zvakanyanya nevashandisi vazhinji, nekuti sezvo tekinoroji inofambira mberi, simba riri nyore kunyorera uye bvumidza zvikwereti kune chero munhu. Nekudaro, kunyangwe ichizivikanwa zvakadaro, zvikwereti hazvisati zvazivikanwa kune vazhinji vashandisi, kunyanya mundima yemirau kana mutemo, uye rimwe rematemu rinofanira kutifadza, uye iro zvakadaro rinowanzoenda risingazivikanwe kufarira mari zviri pamutemo, asi tisati tanzwisisa izwi iri tinofanirwa kunzwisisa zvinotevera.
When isu tinonyorera chikwereti Tinobvumirana nemukweretesi kana vezvemari nguva yatinofanira kubhadhara chikwereti chedu; kuwedzera kune izvo zvinotsanangurwa iyo mubereko iyo inoiswa kune base base mari yemari, kufarira uku kunogona kuve nyore kana mukomboni, uyezve kunogona chinja nguva yekuwedzera maari matinofanira kubhadhara zvikwereti zvedu.
Uye kunyangwe parizvino zvese zvichiratidzika kunge zvakakwana, pane mamiriro ezvinhu anoitika muhupenyu chaihwo uye asingagare achidzora, imwe yeaya mamiriro ndiko kunonoka kumwe kubhadhara kwechikwereti chedu.
Pane mamiriro maviri ekongiri, kana tanonoka kubhadhara imwechete kubhadhara chikwereti, sezvazviri nema microcredits mune iyo mukweretesi anokumbira kubhadhara chikwereti mubhadharo mumwe chete, kazhinji mukati memwedzi wekubvumidza chikwereti. Mamiriro echipiri ndee patinononoka kubhadhara yunifomu nhevedzano, semuenzaniso, kana kubhadhara kwedu kuchifanira kuitwa musi wechipiri wemwedzi wega wega uye mumwedzi waNyamavhuvhu takanonoka, tisingakwanise kuvhara mari inoenderana mwedzi iwoyo.
Imwe nyaya yatinofanira kuziva tisati tatsanangura musoro wenyaya wechinyorwa ichi kunonoka, iri izwi repamutemo rinoshandiswa kutsanangura iyo kutadza kubhadhara munguva yakabvumiranwa nekuda kwekuregeredza, zvichireva kuti kunonoka kune chinangwa.
Izvi zvakakosha kuti urambe uchifunga nekuti iyo kufarira kwepamutemo kwemari Izvo zvinongoshanda chete kana munhu uyo ​​anofanirwa kuvhara chikwereti ari mukunonoka; Mune mamwe mazwi, kana icho chikonzero nei iwe wanga usingakwanise kuita muripo wacho yaive mamiriro kunze kwekutonga kwako, chirango chinogona kusiyana.
Chinhu chekupedzisira chekuti isu tinofanirwa kunzwisisa zvakajeka tisati tapinda zvizere mu sarudzo yemutemo inofarira mari ndeyekuti chikwereti chatinokumbira chibvumirano kana chibvumirano pakati pemukweretesi nemushandisi; Uye semubvumirano ipi neipi, mapato ese ari maviri anobvumirana kuita zvimwe zvikamu, uye kana tikasaita zvinoenderana nazvo, pane zvikamu izvo mune chirango chekutadza kutevedzera. Izvi zvinoreva kuti kana tikazvipira kubhadhara pazuva rechipiri uye tikasaita kudaro, vezvemari vanogona kuita chirango.
1 Mari inofarira mari
2 Mutemo wazvino
3 Nyaya inokosha
4 Kufarira kunonoka kwemutero uye kunonoka kutengeserana
Mari inofarira mari
Chirango iyo inotarisirwa ne kunonoka kubhadhara kubvumirana kunowanzoitika kuburikidza nemari inobhadharwa yeimwe huwandu. Izvi zvinowedzerwa pachiyero chedu kuti chibhadharwe chingave chikonzero chemasangano emari kushungurudza kuitira kuti mari zhinji ibhadhariswe, saka kutonga mamiriro aya hurumende inopa kubvumidzwa kwemutemo kwemari.
Kana tangonzwisisa kuti chiiko chibvumirano, chikwereti, kunonoka, uye chibhadhariso, tinokwanisa kunyatsopinda muchibvumirano cheiyo pamutemo kufarira nguva yemari. Izvi zvinogona kutsanangurwa seperesenti yemari yakatemwa zviri pamutemo nehurumende, kuitira kuti ugone kuverenga nenzira kwayo chiyero icho chinofanirwa kubhadharwa semubhadharo wekuita kuti muripo unonoke.
Zvino ichokwadi kuti hurumende inosimbisa iyo chiyero chegore rese izvo zvinoshanda kune zviitiko zvine kunonoka kwekubhadhara, asi chimwe chinhu chakakosha kwazvo kufunga ndechekuti chiyero chemubereko chinoshanda chete kana pasina chibvumirano chekuti mushandisi wechikwereti anobvuma kugadzira mari dzechikwereti zvichibva pane imwe mari yechimbadzo.
Izvo ndezve pamusoro apa zvakakosha kwazvo kuti sevashandisi vechikwereti tiongorore kontrakiti zvakanyatsonaka mukutsvaga kumwe kutaurwa mune iyi nyaya, nekuti kana tikatendera kuti chibharo chakaitwa nechiyero chisiri icho kufarira mari zviri pamutemo, ipapo chiyero chaigona kunge chakawedzera zvakanyanya.
Nekudaro, kune akawanda mamiriro ezvinhu, muchiitiko chekuti hapana bato rakabvumirana kune imwe kufarira kana ikanonoka, mutemo unosimbisa huwandu hunovharidzirwa. Dzimwe nguva kune mirau yakanangana pane zvimwe zvinhu, saka zvakakosha kuti uongorore iyi mitemo kuitira kuti ugone kunyatso tsanangura huwandu hunovharwa. Chinyorwa nhamba 1108 yeCivil Code ndiye anoona nezve kudzora zvinhu izvi.
Imwe nyaya yatinofanirwa kufunga ndeyekuti iyi mubereko unoshanda kune iyo chikwereti, Naizvozvo, iyo inobuditsa yakazara kubhadhara ichave yakaenzana nemubhadharo unoenderana nenguva yakatarwa yenguva pamwe nemubhadharo wekunonoka. Naizvozvo, mubhadharo unovharirwa wakaenzana nechiyero chemari yechikwereti pamwe nemari yacho inowedzerwa sechiwedzerwa.
Chinhu chinofanira kujekeswa ndechekuti parizvino ndiani anotonga izvi chikwereti chebhangi bhanga reSpain zvakazvimiririra, kuti kunyangwe iri pasi pekurairwa nehurumende yeSpain, chinzvimbo chakasiyana.
Izvi zvakakosha nekuti iyo kufarira kwepamutemo kwemari mukutanga kwayo kana yaive yakanyatsogadziriswa nehurumende, ndiko kuti chikamu chepamutemo, zvekuti mutemo wayo wakarairwa nemutemo.
Yakanga iri kusvika Zvita 30, 1997 kuti chero hukama huripo pakati pe kufarira kwepamutemo kwemari nemari yechimbadzo yakarairwa nebhangi reSpain. Nenzira iyi, hukama hwaivepo pakati pehuwandu hwechimbadzo hwakarairwa kubhangi uye kufarira kwemutemo kwemari.
Izvi zvaive zvakakosha zvakanyanya nekuti mukati megore ra2011 na2012 chikwereti cheveruzhinji cheSpain chakakwenya zvine mukurumbira, nekuda kweizvi misika yezvemari yakawedzera kukosha kwavo nenzira imwecheteyo.
Asi nekuda kwekubviswa kwehukama pakati pezvakataurwa mhindu yemari inodiwa zviri pamutemo nemari Izvo hazvina kuratidza chero chakakosha kuwedzera, chingadai chakaitika dai isina kufunga nezvenyaya iyi.
Chinhu chinonakidza chenhoroondo maererano nemutemo pane iyi nyaya ndechekuti muSpain inodzivirira yeMorocco paive nemitemo yakazvimiririra kubva kuSpain yese.
Panzvimbo ino kufarira kwakaiswa pa6% pagore, asi ini ndinodzikamisawo mukana wekuti avo vanobatanidzwa vashandise chibvumirano icho chakati iteres yakakura kudarika 12%, saka zvisinei nekuti mapato ese akasaina chibvumirano, mu mwero wakabvumiranwa waive wakakwira kupfuura gumi nezviviri kubva muzana, izvi zvaizobviswa nemutemo
Shanduko yekupedzisira kumutemo uyu yaive muna 1946, umo kufarira kwemutemo pamari kwakaiswa pa4%. Shure kwaizvozvo, nekukurumidza apo dziviriro yeMorocco payakasiya kurapwa kwakasarudzika uye ikave nemutemo nemutemo mumwe chete waivepo muSpain yese.
Kufarira kunonoka kwemutero uye kunonoka kutengeserana
Pane maviri marudzi ekunonoka kubhadhara mubereko, mutero uye wekutengesa. Ose ari maviri ane zvikonzero zvakasiyana zvekuvapo uye nekudaro akasiyana mamiriro mukubhadharwa kwemunhu kune mukweretesi; kuti tinzwisise zvirinani, ngationgororei vaviri vakazvimiririra.
Kutanga ne mutero unokanganisa kufarira, huwandu hunosimbiswa mukushanda kunosanganisira vanhu, makambani nemasangano eruzhinji. Ichi chiero chemubereko chakanangana zvakananga nesangano remitero, uye iri bhenefiti yakaenzana iyo inodikanwa sekubhadhara kune vanobhadhara.
Nenzira iri nyore tinogona kutsanangura kuti uyu muripo watinofanira kuita kune wevanomutero nekuda kwekuunganidzwa kwemari nekuda kwekunonoka kubhadharwa kwechikwereti.
Zvino, kutengesa kunonoka kubhadhara mubereko hurongwa hwepamutemo hunotongwa, hwaitongwa neParamende yekuEurope neKanzuru. Izvi zvinogadzirisa nyaya umo mashandiro akaiswa pakati pemakambani anobatanidzwa, kuitira kuti pasave nevanhu vanobatanidzwa. Iyo zvakare inogadzirisa mamiriro ezvinhu mune eruzhinji manejimendi anobatanidzwa. Iyi nyaya ine kudzika kwakakura mumitemo yayo yese.
Ngatitangei nenyaya yekuti iyo izwi rekubhadhara rinogumira kunguva yemazuva makumi matanhatu, uye izvi hazvigone kuwedzerwa pasi pemamiriro api zvawo. Pamusoro peiyo nguva yenguva inofungisisa mazuva makumi matanhatu inotanga kwete panotambirwa invoice, asi nekutambirwa kwezvinhu kana zvinhu.
Dzimwe nyaya dzinotarisirwa ndedze kuunganidzwa kwema invoice kuitira kuti vabhadhare kamwe chete pakati pevamwe. Mune zviitiko izvi, zviitiko zvinonyanya kutarisana nebasa remutengi kugadzirisa kutenga kwakaitwa kune imwe kambani.
Kutora zvese izvi uchifunga kwakakosha kwazvo, kunyangwe zvichingogara zviri nani kuti usapfuure nguva dzekubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvematongerwo enyika » Zvematongerwo enyika » Ndezvipi zvinofarirwa nemari zviri pamutemo?
Nguva yakanakisa inouya yezvikamu mumusika wekutengesa